ကုမ္ပဏီသတင်းများထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - တရုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းများစက်ရုံ
ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အကြီးစားငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အသေးစားငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ငရုတ်သီးအရောင် Sorting စက်
introduce lulu chili stem cutting machine
The automatic chili stem cutting machine (handle removing machine) produced by our company is mainly used to cut the handle of dried chili. The net cutting height of the equipment is up to 96, the pepper damage is low, and the efficacy is up to 600KG per hour. According to the customization, it c...
ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များဖို့နိဒါန်း
စစ်မှန်သောဘဝ၌, ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကို အသုံးပြု. ၏နည်းပညာကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်သုံးခဲ့သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရာသီဥတုငရုတ်သီးကြီးထွားလာမှုအတွက်ကပိုသင့်လျော်သည်အဘယ်မှာရှိသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်, စီချွမ်ကလူမသာငရုတ်သီးကိုစားလို, ငရုတ်သီးတရုတ်စီချွမ်ပြည်နယ်တစ်ခုအထူးပြုကြောင်းကိုငါသိ၏။ , အဓိကသီးနှံ၏ဤမျိုးများအတွက် ...
ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အသုံးပြုမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့မှတ်ဘာတွေလဲ?
Chili stem cutting machine are aimed at many enterprises that need chili processing now. In the past, people used to cut chili handles by hand, which not only tookalong time, but also caused very serious damage to the skin of the body. Workers wear thick bandages every day, and sometime...
the difference between chili cutting machine with chili powder machine
In real life, chilli cutting machine and chilli powder machine asacommon machine in the process of chilli processing, has been widely used chilli processing machine.Today, we are going to introduce to you is the pepper powder machine and pepper cutting machine the working principle o...
ဘယ်လိုငရုတ်သီးကို stem စက်အကျင့်ကိုကျင့်ဖြတ်တောက်ထားဘူး
With the continuous development of technology, for all kinds of convenient machines in life, they are also beginning to appear in the market. Chili stem cutting machine are also one of them. How to handle such kinds of chili? It may still be necessary to choose from such functions and pri...
Introduce our newest chili stem cutting machine
The fully automatic chili stem cutting machine (handle remover) produced by our company is mainly used for dry and wet chili stem removal. The equipment can be cut as high as 97% to 98%, the chili stem damage is low, and the efficiency can reach 600 KG per hour. It can adapt to different varie...
In real life, chilli cutting machine and chilli powder machine asacommon machine in the process of chilli processing, has been widely used chilli processing machine.Today, we are going to introduce to you is the pepper powder machine and pepper cutting machine the working pr...
ရိုးရာလက်ဖြစ်တွေညှပ်နှင့်အတူငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်ကဘာတွေလဲ
Today, let’s takealook at it. First of all, the traditional manual for chili in addition to time-consuming and extremely inefficient. The chili stem cutting machine are completely replaced by machinery to replace human repetitive labor, not only greatly improve the efficiency of l...
instruction using the chili stem cutting machine
by admin on 19-08-05
chili stem cutting machine for many needs of enterprises and produceakind of machinery and equipment, in the past, people were cut by hand chili, not only time-consuming, but also to the body skin injury is very serious, workers with thick bandage every day, sometimes hand...
အသစ်ကငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်ကဘာတွေလဲ
by admin on 19-08-03
အသစ်ကငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်ကဘာတွေလဲ? ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်အချို့ဒေသများရှိစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစက်ဖြတ်တောက်တဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာငရုတ်သီးကို stem ဒီဇိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုမလွှဲမရှောင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံဦးထုပ် ...
Chili stem cutting machine have good prospects for development
This age has long since entered the era of mechanical automation, and even agriculture is gradually entering the era of automation.Pepper cutting machine is one of the mechanical products isarepresentative, pepper cutting machine to the advent of agriculture has brought great convenience, reduc...
Lulu Chili Stem Cutting Machine – Customers are worth choosing
Lulu agricultural equipment company’s mechanical automation is constantly updated, and the chili cutting machine is no exception. The price of the upgraded stem cutting machine is still reasonable.New type of chili to put the machine to get rid of the traditional hot pepper to the machin...
12Next ကို> >> စာမျက်နှာ 1/2
နေရပ်လိပ်စာ: Jiaozhou စီးတီး, Qingdao စီးတီး, ရှန်ဒေါင်း, Jiaolai စက်မှုပန်းခြံ
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13361271555
Introduction to the advantages of using c...
the difference between chili cutting mach...
How does the chili stem cutting machine w...
အဆိုပါ Ford ကားလိုဂိုနှင့် Broncos အမည် Ford Motor Company ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဂန္ထဝင် Ford ကား Broncos အဆိုပါ Ford Motor Company နဲ့ဆက်စပ်မပေးပါ။